4-ọrụ mgbe nile okpomọkụ RGB ịsa ịsa usoro, 600x800 mm mmiri ozuzo ịsa setịpụrụ na, spa ugboelu, mmiri ozuzo, 304 igwe anaghị agba nchara, ịsa ahụ foset, aka ịsa - arcorarobinet
Welcome / Wụsara kọlụm / usoro mmiri / 4-arụ ọrụ mgbe niile okpomọkụ RGB ịsa ahụ usoro, 600 × 800 mm mmiri ozuzo ịsa setịpụrụ na, spa jet, mmiri ozuzo, 304 igwe anaghị agba nchara, ịsa ahụ ọkpọkọ, aka aka
Aha Ahịa: hm
Njirimara: Ikanam ìhè
Njirimara: Thermostatic valves
Ọnọdụ njikwa mmiri / mmiri ọkụ: njikwa akpaka akpaka
:Dị: versiondị na-agbanwe agbanwe
Nọmba nlereanya: HM-868001
Ihe Valve Isi: Seramiiki
Style: dịkọrọ ndụ
Elu elu: igwe anaghị agba nchara
Onu ogugu: Ejiri isii
Ikanam mmiri ozuzo mmiri ozuzo Ọrụ 1: Mmiri
Fucntion 2 ịsa ahụ Head: ịhịa aka n'ahụ Waterfall
Nnukwu Mmiri ozuzo Ikanam ịtọ Ntọala 3: Ọnọdụ Mgbochi Mgbochi
Ikanam ịsa ịtọ Fucntion 4 :: SPA alụlụ
Ọrụ Ikanam Ikanam 5 :: Mmiri mmiri + Mmiri ozuzo + Ihe Mgbochi + SPA Fog Mode
Ọrụ 6 Bathroom Foset Shower Set
Ọrụ mmiri ozuzo setịpụrụ Ọrụ 7 :: Nkesa mmiri na ọkụ eletrik, dị nchebe
Agba agba ọkụ ọkụ na ịwụ mmiri: njikwa ntanetị
Mmiri mmiri ozuzo mmiri na-asọpụta: 10-60L / min
Athdị Bath & Shower Type: lọ Ahịa Sholọ Ahịa
Iji obere ịsa ahụ nwere ike ọ gaghị enye gị ohere iso ezinụlọ gị saa ahụ. Nnukwu mmiri a na-asa mbara na-eme ka adịghị ike ọ bụla. Nwere ike ịnụ ụtọ oge a gị na onye ị hụrụ n'anya ma ọ bụ nwa gị. Ọ dị mma maka onye ọ bụla. Mee ka ike gwụ gị n'ụbọchị gị.
Ọ bụ a multifunctional ịsa na thermostatic igwekota. Atụmatụ: nsụda mmiri, mmiri ozuzo, kọlụm mmiri mmiri, SPA fog, wdg. N’otu ntabi anya, ọ na-enye ịsa ahụ gị ọmarịcha anya, dịka na họtel mara mma ma ọ bụ spa. Ọ na-enye mmiri dị egwu na ahụmịhe na-enye obi ụtọ. Ọ mara mma ma dị ike na arụmọrụ dị mma na nrụgide mmiri dị elu ma ọ bụ dị ala.
Nwere ike ịnwale ezigbo mmiri ozuzo mgbe ị na-asa ahụ. Nwere ike ịnụ ụtọ ịhịa aka nke mmiri nsụda dị n'ụlọ. Nwere ike ịnụ ụtọ spa, sauna, ịhịa aka n'ahụ, nchekasị nrụgide na ịrụ ọrụ n'ụlọ n'efu. Ọ bụ nhọrọ kacha mma na ọ bụ nhọrọ ịnụ ụtọ ndụ.
Usoro mmiri ịsa ahụ thermostatic bụ ọkpọkọ mmiri na-agba mmiri dị elu, 10-60L / min. N'uko echichi New electrolytic mgbochi nchara mkpuchi technology agaghị ajari. Ndị agadi na ndị inyom dị ime nwere ike iji ya. Na-agbaso ụkpụrụ nduzi mba, agaghị emerụ ahụike mmadụ. Mfe ịwụnye Anyị ga-enye gị ntuziaka nwụnye.
Unique hm ngwaahịa pụrụ iche mgbe ịrechara ahịa - akwụkwọ ikike ngwaahịa afọ 10, ọ bụrụ na ngwaahịa a nwere nsogbu ọ bụla ma ọ bụ na ị wụnyeghị ya, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị n'oge ọ bụla, anyị ga-edozi nsogbu ahụ ozugbo. Anyị nwere ndị ọrụ nlekọta ndị ahịa siri ike iji nyere gị aka idozi nsogbu ọ bụla ma nye gị ahụmịhe ịzụ ahịa ka mma.